SHADOWGUN LEGENDS - Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် FPS PvP နှင့် Coop Shooting Game APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Shadowgun ဒဏ္ဍာရီ - FPS PvP နှင့် Coop သေနတ်ပစ်ဂိမ်း
Shadowgun ဒဏ္ဍာရီ - ဂိမ်း APK ကိုသေနတ်ပစ် FPS PvP နှင့် Coop
မော်ကွန်းဇာတ်လမ်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ, အပြိုင်အဆိုင် PvP သို့မဟုတ်သမဝါယမအွန်လိုင်းဂိမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစား!
သေအစပျိုး, သေအစပျိုး2နှင့် Unkilled ၏စာရေးဆရာများအနေဖြင့်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထက်ပို 200 သန်းကစားသမားအားဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်အောင်မြင်သောဖုတ်ကောင် FPS ဂိမ်း။
Shadowgun Legends ၏သိပ္ပံဝတ္ထုကမ်ဘာပျေါတှငျ, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဟာသေစေနိုင်သောဂြိုလ်သားကြူးကျြောကနေတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေး၏နောက်ဆုံးလိုင်း Shadowgun, ဒဏ္ဍာရီသူရဲမြားနှငျ့သူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေလဲ? ပစ်ခတ်မှုအရေးယူ join နှင့်အတူအဘယ်သူရဲ့သူဌေးကတော့ galaxy ပြသ!
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပူးပေါင်းကာအပြည့်အဝဖွင့ ်. စိတျလှုပျရှားဖှယျပုံပြင်ကင်ပိန်း,
4 ကွဲပြားခြားနားဂြိုလ်ပေါ်မစ်ရှင်ရာပေါင်းများစွာကျော် spanning အနေနဲ့မော်ကွန်းဇာတ်လမ်းကင်ပိန်းအတွက်တကျွန်းတနိုင်ငံသားကြူးကျြောကနေလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ရှင်သန်မှုများအတွက် Fight ။ အခုတော့တိုင်းမစ်ရှင်အတွက်ပူးပေါင်းဖွင့ ်. ဖြစ်ပါသည်
ရှောင်တခင်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် Arena အတွက် hardcore, အတွေ့အကြုံများ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတပ်ဖွဲ့များ join နှင့်အတူတကွဘုန်းအသရေနှင့်ဒဏ္ဍာရီပြန်ပေးလော့များအတွက်ဧရာမရန်သူအကြီးအကဲတွေ shoot ။ သို့မဟုတ် War အားကစားပြိုင်ပွဲနယ်ပယ်တွင်ရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကနေအများဆုံးအပြင်းစားရန်။
လက်ရှိအချိန် PvP စစျပှဲမြား
ထူးခြားတဲ့ multiplayer PvP ဂိမ်းသည် Modes နှင့်ကွဲပြားခြားနား PvP နယ်ပယ်တွင်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် Fight ။ 1vs1 duels ၌သင်တို့၏မိတ်ဆွေတစ်စိန်ခေါ်သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်ဂိမ်းရိုက်ကူးအတွက်အကောင်းဆုံး PvP အတွေ့အကြုံအတွက် 4vs4 ဂိမ်းသည် Modes အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း။
700 + လက်နက်များ, သင့်ရဲ့လက်နက်များနှင့်အရေပြား Customize!
ပစ္စတို, Assault ရိုင်ဖယ်, Sub-Machine Guns, အကြီးစားစက် Guns, သေနတ်များ, Sniper ရိုင်ဖယ်တပ်နှင့် Rocket Launcher အပါအဝင် 600 ထူးခြားတဲ့သေနတ်များကျော်ကနေရွေးချယ်ပါ။
60 + ထူးခြားသောချပ်ဝတ်တန်ဆာသတ်မှတ်ပေးသည်, အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်, ပန်းချီ, အရေပြား, စတစ်ကာများ
, 1000 လက်နက်ကိုအပိုင်းပိုင်းကျော်စုဆောင်းအားလုံး Paint သံဗူးကိုရှာဖွေ, အရေပြား, စတစ်ကာများနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ရှာဖွေနေလက်နက်စုံကိုတည်ဆောက်စေ။
အခြားကစားသမားများ, အလည်အပတ်ခရီးရောင်းချသူနှင့်အတူအပြန်အလှန်မစ်ရှင်ကိုလက်မခံ, ဂိမ်းရဲ့ဇွဲ Hub အတွက်ခက်ခဲပြီးအများကြီးပို party ။ စစ်တိုက်အသင်းနှင့်ပုံစံ Guilds ဖန်တီး, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ chat ။
ထူးခြားတဲ့ဆုကြေးစနစ် - ထိုဠာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာ
သင်ကစားပွဲကစားဘယ်လိုအဘို့ဆုခခြံ Get ။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အရေးယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ကျော်ကြားမှုစနစ်ဖြင့်တန်ဖိုးထားသည်။ ပိုမိုကျော်ကြားသငျသညျကမ်ဘာကိုသင့်လုပ်ရပ်တွေကိုတုံ့ပြန်မည်ကိုပိုများမှာ!
MADFINGER အားကစားပြိုင်ပွဲမှာကျနော်တို့ကမိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်ဖြစ်နိုင်သောအရာကိုအများ၏ရှေ့တန်းတွန်း! Shadowgun Legends console နဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းအကြားလိုင်းများ blurs တဲ့သဲမိုဘိုင်းသေနတ်သမားဖြစ်ပါတယ်။
✔အခမဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံး FPS RPG သေနတ်ပစ်ဂိမ်း Play! ယခုတိုက်ပွဲ Join!
တစ်ဦးတည်းသောဝံပုလွေအဖြစ်အတွေ့အကြုံကို PVP multiplayer ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများ, Coop သို့မဟုတ်ပြဇာတ်။ ဒီလူကြိုက်များ FPS RPG multiplayer ဂိမ်းအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ရှာပါ။ လူသားတွေဟာနှင့်ကြောက်စရာတပါးအကြား-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစစ်ကာလအတွင်းအားလုံးသေနတ်များ, သံချပ်ကာ, Emotion, စတစ်ကာများကိုရှာပါ။ အဆိုပါအရက်ဆိုင်များတွင်ကြိမ်လျှော့ပေါ့, စိန်ခေါ်မှုတိုက်ပွဲများတွေ့ကြုံခံစားသို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီပြန်ပေးလော့စုသိမ်းမည်။
MADFINGER အားကစားပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ပေါ်မှနယ်နိမိတ်တွန်းဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုစိန်ခေါ်မယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ console ကိုအရည်အသွေးကို FPS ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းဂရပ်ဖစ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသော FPS ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 220 ကျော်ကစားသမားတွေအရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းသစ်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အပျနှံခြင်းဖြင့်လွပါပြီ။ ကျနော်တို့ 2010 ကတည်းကမိုဘိုင်းအတွက် FPS အက်ရှင်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲသူကိုအကောင်းဆုံးပြုစုသူဖြစ်ကြ၏။
အခုနောက်တအဆင့်အထိအမာခံမိုဘိုင်းပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများကိုယူပြီးပါတယ်။ Shadowgun Legends သင်၏လက်၏စွန်ပလွံအတွက်အဆုံးစွန်မြဲကမ္ဘာကြီးသေနတ်သမား, သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်တို့နှင့်အတူအယူနိုငျသောအမာခံဂိမ်း console ကအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။
ခ> အဆိုပါသန်းခိုင်ခံ့အဝန်းကို Join
▶ Facebook က: facebook.com/shadowgun
▶ Instagram ကို: instagram.com/madfingergames
YouTube ကို▶: youtube.com/madfingergames
သငျသညျတူညီသောအဟောင်းတိုက်ပွဲ Royale သို့မဟုတ် PvP သာဂိမ်းကစားငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်✔, Shadowgun Legends ကို download လုပ်ပါ - အကောင်းဆုံး FPS RPG သေနတ်ပစ်ဂိမ်း!
feature အသစ်နဲ့ content
- ပိုကောင်းဂျာနယ်, မြေပုံမျက်နှာပြင်, မျက်နှာပြင်သို့ပြန်သွားရန်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က UI ကို
- နယူး cutscenes PvP နှင့် Arena မတိုင်မီကစားသမားမိတ်ဆက်
- အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်အလှကုန်နှင့်အတူနယူး IAP အထုပ်
- နယူးအလှကုန် Cape
- နယူး Emotion
- ထိုတိုးတက်မှုသစ်ပင်နှင့်အတူ rebalanced ကျွမ်းကျင်မှု
အားလုံးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကအသေးစိတ်စာရင်း shadowgunlegends.com/news မှာတွေ့နိုင်ပါသည်
Shadowgun ဒဏ္ဍာရီ - FPS PvP နှင့် Coop သေနတ်ပစ်ဂိမ်း
1.13 GB ကို